Madax shub mise Mac-macaan iyo xan!!.
Written by bile mohamed on 09 November 2017 .
Dhaqan roga yimid kuma eka meelo gaar ah ee waxa uu gudaha u galay ama ku mil may meelo badan oo aan laga fileyn taasi oo marka kuugu horeysa keeneysa amakaag.
Akhristoow hadaad ogeyn marka laga joogo Soomaaliya Madax shub, abay-abaay taas oo la sameyn jiray inta ay hablaha isu yimaadaan oo bun iyo Cabuulo dubtaan oo madaxa shubtaan isla markaana xoogaa xadreeyaan ayaa sidaas ku dhamaan jitay waa la badalay Magaalada Bergen yaab iyo amakaag ayaa laga soo warinayaa.
Markii ugu horeeysay ayaa labada indhood ay qabteen meel aad moodo in xaflad aroos ama qof dhalsho loogu sameynayo si aad loo soo qurxiyay ayaa la ii sheegay in lagu alle baryayo sida ay ula jeedaan hablahaasi.
In cabaar ah markii wariye ka tirsan Wargeyska Aayaha Nolosha, isla markaana joogay halkaasi uu xooraan saday xaruntii kulanka ka dhacay ayaa indhahiisa ay qabteen gaari ka yimid goobaha macmacaanka lagu iibiyo kaasi ku yimid dalabaad.
Gaarigu waxa uu wadaa Sanbuus cabitaan iyo Macmacaan kale goobtii ayaa la keenay alaabtii markii aan su’aalay waxa la ii sheegay in loogu tala galay madax shubkaan.
Ma xuma in la badalo cunadii laakiin wax iga yaabshoo aan maqlay ayaa ahaa meesha maba joogto hal islaan oo wax ka taqaan xaga xadreynta ee waxa isugu yimid hablo kale.
Cunadii iyo cabistii ayaa la guda galay in cabaar ah markii la dhergay ayaa la bilaabay qaraaxo iyo sheeko wax aan loo joogin, taas oo aan aad ula cajabay.
Guntii iyo Gabogabadii ayuu leeyahay wariye Bile Baastey waxa aan orod uga baxay meeshii aniga oo la yaaban waxa meesha ka dhacay taas oo igu qasabtay in aan uga sheekeeyo wariye saalax dheere oo ah wariyaha qalinka u qaatay qormadan gaaban taas oo aan ciwaankeedu u xushay Madax shub mise macmacaan iyo xan.
Wadajirkii Diyaarineed: Saalax Nuur Cali (saalax dheere) iyo Soo tabintii Wariye Bile Baastey.